मार्न खोज्‍ने आमाले नै बचाउँदैछिन् छोरीलाई जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
मार्न खोज्‍ने आमाले नै बचाउँदैछिन् छोरीलाई
बुधबार १४ माघ, २०७१
अझै केही दिन यहीं अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्छ’, अस्पतालका डा. डिकनाथ यादवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अस्पताल ल्याउँदा शिशुको अवस्था गम्भीर थियो। अहिले ठीक हुँदैछ।’ यादवले नवजात शिशुको स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्दो प्रयास भइरहेको बताए। गीतादेवीले शनिबार फालेकी पाँच दिनकी ती शिशुलाई चार घन्टामै प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। माघ ६ गते जन्मिएकी ती शिशु मंगलबार आठ दिनकी भएकी छन्। प्रहरीको कडा निगरानीमा नवजात शिशुलाई अस्पतालकै शय्यामा दूध चुसाइरहेकी गीतादेवी आफ्नो कुकर्मको पश्चातापले विक्षिप्त छिन्। जोसँग भेट्दा पनि उनी भन्छिन्, ‘मैलै ठूलो पाप गरें हजुर!’
पाँच वर्षीया र दुई वर्षीया छोरीपछि जन्मिएकी छोरीलाई गरिबीले पाल्न नसक्ने भनी गीतादेवीले फालेकी थिइन्। रोजगारीका लागि मलेसिया गएका पतिले पनि ६ महिनामा सात हजार रुपैयाँमात्र पठाएको गीताले बताइन्। ती शिशुको उद्धार गर्दै प्रहरीले आमा गीतालाई नियन्त्रणमा लिएर शिशुसहित अस्पताल भर्ना गराएको थियो। नवजात शिशुको स्वास्थ्य उपचार र स्याहारका लागि काठमाडौंस्थित होटेल तपोवनले मंगलबार १० हजार नगद सहयोग गरेको छ। होटेल तपोवनका प्रबन्धक राघवेन्द्र यादवले भने, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट घटनाबारे थाहा भएपछि सहयोग गरेका हौं।’ गरिबीले मन विचलित भएपछि छोरी फालेकोमा पछुताउँदै गीतादेवीले पाएको सहयोग छोरीको स्याहारसुसारमा खर्च गर्ने बताइन्। पत्रकार रक्षा चौधरीले पनि गीतालाई आर्थिक सहयोग गरेकी छन्। अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।